ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -sewingmachineaccessories.com.tw
လေးစားရပါသောလူကြီးမင်းများ! ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အရည်အသွေးမြင့်မားကမ်းလှမ်း ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ။ ကျနော်တို့အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုများကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းကျွန်တော်တို့၏နည်းပညာ, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ်ဆန်းသစ်တီထွင်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
။ ထုတ်လုပ်သူများကစွမ်းအင်, သိမ်းဆည်းခြင်း, ဆက်သွယ်မှုကို, privacy နဲ့ပြင်ပကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြန့်ချိအထိုင်ကြသည်။
ပုံစံ - VC2700
Yamato မော်ဒယ် VC2700 ညှပ်
ကျနော်တို့ကအလားတူညှပ် Kingtex မှထောက်ပံ့,နေပြည်တော်,နှင့်အခြားတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ.ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုချင်းစီအပိုပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်သည်.ဒါဟာအစအီလက်ထရောနစ်ယူနစ်များပါဝင်သည်.ငါတို့သည်လည်းအဖြိုက်နက်ဗားရှင်း fixed ဓါးရှိသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sewingmachineaccessories.com.tw/my/stitch-machine-parts.html
Juki မော်ဒယ် Bartack ချုံ့LK-1900B Juki မော်ဒယ် Bartack စက်၏ချုံ့စက်.ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသံမဏိပြားကိုသံမဏိဖြင့်အပူပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်သည်.အပေါက်လမ်းညွှန်၏မျက်နှာပြင်မာကျောမှုသည် HV 1800 ထက်ကျော်လွန်နေသည်(Juki စစ်မှန်တဲ့အပေါက်လမ်းညွှန်ဟာ HV 400 လောက်ရှိတယ်).
ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်သူနှင့် ချုပ်စက်အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ -ကျော် 76,822 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ sewingmachineaccessories.com.tw
Cutter အပ်ချုပ် Thread
Juki Zigzag ချုပ်Zigzag ချုပ်ချပ် ဤ Juki Zigzag ညှပ် LZ အတွက်အထူးသင့်လျော်သည်-2280,LZ-2284,နှင့် LZ-2290.ဓါးသွားများကိုအထူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်.အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့သူတွေအတွက်ချုံ့ပေးတဲ့ထိန်းချုပ်ရေးယူနစ်တွေလည်းရှိတယ်-zigzag စက်များအလိုအလျောက်ချုံ့.